trainride Archives | စာမျက်နှာ2၏3| တစ်ဦးကရထား Save
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ မဟုတ်ရှည် Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအပြီးအများအပြားဖွင့်လှစ်သည့် Eurostar ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဖြစ်ရည်ညွှန်းအဖြစ် 1994, ကခေတ်သစ်ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ်ခုနစ်ပါးတွင်တဦးတည်းဟုအမည်ပေးထားသည့်ခံခဲ့ရ. မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာများ၏အမေရိကန်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အဆိုအရ, ကြောင်းခေါင်းစဉ်ကောင်းစွာထိုက်တန်တဲ့ခဲ့သည်. It put the…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဥရောပတိုက်တွင်အီစတာပွဲတော်တိုင်းပြည်ကနေတိုင်းပြည်နှင့်မြို့ကနေမြို့ကိုကွဲပြား. ဒါဟာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများ၏အထင်ရှားဆုံးနှင့်အသက်အကြီးဆုံးပွဲတော်များတစ်ဦးရဲ့. အီစတာသင်္ချိုင်းတော်မှယေရှုခရစ်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏အခမ်းအနားဖြစ်ပါသည်. The celebration date for Easter…